Xinhua Myanmar - China
ဒူဘိုင်း ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန်/စိုးမိုး
တရုတ်နိုင်ငံ CSCEC ME ကုမ္ပဏီ နှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ SKE&C ကုမ္ပဏီ တို့ ပူးပေါင်းတာဝန်ယူ တည်ဆောက်သည့် ယူအေအီးနိုင်ငံ ရထားလမ်းစီမံကိန်းသည် လတ်တလောရက်ပိုင်းတွင် အရေးပါသည့် ချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းများကို သက်မှတ်အချိန်အတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ရထားလမ်းခင်းကျင်းသည့် လုပ်ငန်းအား တရားဝင် စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန် ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်(ဆင်ဟွာ) ရေးသားသူ/ဟေမာန်
တရုတ်-မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော မြန်မာနိုင်ငံ မန္တလေး-ကျောက်ဖြူရထားလမ်း စီမံကိန်း ဖြစ်မြောက်နိုင်ခြေလေ့လာမှု (Feasibility Study) ဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာအား ယနေ့ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ သိရသည်။
ပေကျင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်(ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန်/မြတ်မြတ်ဦး
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိသည် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်မှ ၁၆ ရက်အထိ မြန်မာ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဘရူနိုင်းနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံများသို့ တရားဝင်အလည်အပတ်ခရီးစဉ်သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟွာချွမ်းရင်က ယနေ့(ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်)တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဟယ်ဖေ ၊ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် / စိုးမိုး
ကမ္ဘာ့လူသားသမိုင်းတွင် လွန်ခဲ့သော ၃၂ နှစ် က သုတေသန စမ်းသပ်ခန်း၌ ကွမ်တန်ဆက်သွယ်ရေး စတင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး ထိုအချိန်က ကွမ်တန်ဆက်သွယ်ရေး ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည့် အကွာအဝေးသည် ၃၂ စင်တီမီတာ ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းမြို့၌ မီးသတ်သမား စုံတွဲ ၄ တွဲ စုပေါင်းမင်္ဂလာပွဲ ဆင်နွှဲ
ရှန်ဟိုင်း၊ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)ဘာသာပြန်/ကိုငယ်
ရှန်ဟိုင်းမြို့၌ အမြင့် ၄၈၀ မီတာရှိ အထင်ကရ အ‌ဆောက်အဦကို North Bund တွင် တည်ဆောက်မည်
ရှန်ဟိုင်း၊ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)ဘာသာပြန်/ကိုငယ်
တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့၌ အမြင့် ၄၈၀ မီတာရှိ အထင်ကရအဆောက်အဦသစ်တစ်လုံးကို North Bund တွင် တည်ဆောက်သွားရန် စီစဉ်နေပြီး ယင်းသည် ရှန်ဟိုင်းမြို့၏ Bund ကမ်းနားလမ်းကို ပိုမိုချဲ့ထွင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
အင်္ဂါဂြိုလ်စူးစမ်းလေ့လာရေးယာဉ် “ထျန်းဝန်-၁(Tianwen-1)” ၏ ပျံသန်းမှုခရီး ကီလိုမီတာ သန်းပေါင်း(၄၀၀)ကျော်ရှိပြီဖြစ် ၊ ယခုနှစ်တွင် အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်သို့ ဆင်းသက်မည်
ပေကျင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်(ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန်/မြတ်မြတ်ဦး
“ထျန်းဝန်-၁(Tianwen-1)”အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးယာဉ်သည် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် ၆ နာရီ အချိန်အထိဆိုလျှင်（၁၆၃ရက်ကြာ ပျံသန်းပြီးဖြစ်ရာ ပျံသန်းမှုခရီးအကွာအဝေး ကီလိုမီတာ သန်းပေါင်း(၄၀၀)ကျော်ထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာမြေမှ အကွာအဝေး ကီလိုမီတာ သန်းပေါင်း (၁၃၀)၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်မှ အကွာအဝေး ကီလိုမီတာ(၈.၃)သန်း နေရာသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသား အာကာသစီမံခန့်ခွဲမှု ဦးစီးဌာန(CNSA)၏ ပြောကြားချက်များအရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ကွေ့ကျိုးပြည်နယ်ရှိ တိမ်လွှာများဝန်းရံနေသည့် ကောင်းကင်ပေါ်က အနာဂတ် အမြန်လမ်းမကြီး
ကွေ့ကျိူး၊ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန်/မြတ်မြတ်ဦး
ဟဲဆန်းသု ဝူးကျန်း မြစ်ကူးအထူးတံတားကြီးကို တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ကွေ့ကျိုးပြည်နယ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ တံတား၏ စုစုပေါင်း အရှည်မှာ မီတာ (၂,၀၀၀)ရှိပြီး မေထန်-စီချန်း အမြန်လမ်းမကြီး၏ အဓိက စီမံကိန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။
အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ သံခင်းတမန်ခင်း တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြောကြား
ပေကျင်း၊ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)ဘာသာပြန်/ကိုငယ်
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိက တရုတ်နိုင်ငံ၏ သံခင်းတမန်ခင်း ဆောင်ရွက်မှုများသည် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း ၊ အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ခြင်း ၊ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုချောမွေ့လွယ်ကူအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြှင့်တင်ခြင်း တို့၏ အရေးကြီးသော တာဝန်ဝတ္တရားများကို ထမ်းရွက်ခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မကြာသေးခင်က ပေကျင်းမြို့၌ ပြုလုပ်သည့် ဆင်ဟွာသတင်းဌာနနှင့် China Media Group တို့၏ ပူးတွဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု တစ်ခုတွင် ဝမ်ရိက အထက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်ပြည်သူများ၏ အပြည့်အဝအားပေးထောက်ခံမှု နှင့်အတူ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(CPC) ဗဟိုကော်မတီ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် တံခါးဖွင့်မှု နှင့် ပြည့်စုံသေချာသော လမ်းကြောင်းတစ်ခုတွင် အဆိုပါ တာဝန်ဝတ္တရားများကို အလုံးစုံ အပြည့်အဝဖော်ဆောင်ရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဝမ်ရိက ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ သံခင်းတမန်ခင်းသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅,၀၀၀ တရုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားချိန်ကပင် အမြစ်တွယ်ခဲ့ကြောင်း နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံထူထောင်သည့် အချိန်ကတည်းက မိမိကိုယ်ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်ဂရုပြုခြင်း နှင့် အစဉ်အလာ လွတ်လပ်မှုအပေါ်ဂုဏ်ယူခြင်းနောက်ကို တစ်စိုက်မတ်မတ်လိုက်ပါခဲ့ကြောင်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် ငြိမ်းချမ်းစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ဟာ နိုင်ငံတကာဥပဒေ နဲ့ နိုင်ငံအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဖလှယ်မှု (state-to-state exchanges) ဆောင်ရွက်ရာမှာ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအခြေခံစည်းမျဉ်း လိုက်နာခြင်းကို အားပေးထောက်ခံပါတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ညီမျှမှု ၊ တရားမျှတမှုနဲ့ နိုင်ငံတကာ ရေးရာကိစ္စရပ်တွေကိုင်တွယ်ရာမှာ လူသားဆန်မှုတန်ဖိုးတွေနဲ့အခြားမျှဝေမှု လုပ်ပါတယ် ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ သံခင်းတမန်ခင်းသည် တရုတ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ ၊ ပုံစံသဏ္ဍာန် နှင့် အတွေးအခေါ် ပေါ်လွင်မှု တစ်ခုကို ဆည်းပူး ကျင့်သုံးကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကျွန်တော်တို့ဟာ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို လက်တွဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုသိပ်မရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခင်းအကျင်းပေါ်မှာပဲ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့ ဝေဖန်မှုထောက်ပြမှုတွေ နဲ့ အကူအညီဖြစ်စေမယ့် အကြံပြုချက်တွေအပေါ်မှာ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသရေဖျက်တာနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးကိုတော့ ကျွန်တော်တို့က လက်တုံ့ပြန်သွားရမှာပါ ၊ ပြီးတော့ ပိုပြီးအရေးကြီးတာက အင်အားနိုင်ငံရေး(power politics) နဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာချိန်မှာ တရားမျှတမှုအတွက် မဖြစ်မနေ တုံ့ပြန်ပြောရမှာပါပဲ ၊ ဒါဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့သံခင်းတမန်ခင်း နဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့အမျိုးသားရေးပဋိညာဉ် တာဝန်ဝတ္တရားတွေပါပဲ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။(Xinhua)
#China FM, #Wang Yi, #Xinhua, #diplomacy , #2021, #Xinhua
BEIJING, Jan.2(Xinhua) -- Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi said that China's diplomacy shoulders the important responsibilities of safeguarding national interests, defending national dignity, facilitating international cooperation, and promoting world peace.
A grand national flag-raising ceremony is held as part of the celebrations for the New Year's Day at the Tian'anmen Square in Beijing, capital of China, Jan. 1, 2021. (Xinhua/Ju Huanzong)